Ubusuku entliziyweni yesidiliya
Ifulethi elitofotofo kwindawo yokuhlala ezolileyo. Idama lokuqubha langaphandle (ukususela nge-01 kaJulayi ukuya kumhla wama-31 ku-Agasti 2021), indawo yokupaka yabucala (indawo yokupaka enye kuphela) kunye nokunyuswa. Iziko ledolophu yaseNuits-Saint-Georges imizuzu emi-3 ngeenyawo. Ithafa enefenitshala enembono yesidiliya efikelelekayo ngeenyawo. Ikhitshi elitsha, lixhotyiswe, liyasebenza. Umhombiso wangoku, igumbi lokulala elahlukileyo elinebhedi ekumgangatho wehotele, ibhedi yesofa eyi-140X190 kwigumbi lokuhlala. Igumbi lokuhlambela elinebhafu. I-WC eyahlukileyo. Ukupaka ngaphantsi komhlaba kunye ne-lift.
Indawo yethu yenzelwe kwaye yahonjiswa ngumntu othanda i-pastry kunye nomthandi wokufota. Iipastries kunye/okanye iibhiskithi uzinikwa nguSophie ekufikeni kwakho ("ezenziwe ekhaya" iipastries nangawo wonke umdla kaSophie!).
U-Lionel, umfoti oyingcali, uya kukwenza ukuba ufumane iikona zakhe ezifihlakeleyo, ezifihlwe esidiliyeni ngexesha lamava efoto njengesibini okanye njengosapho. Umzuzu wokwenyani iifoto zawo ziya kuba ziinkumbulo zakho ezilungileyo!
Iti kunye nokufakwa kwi "Palais des Thés" kunye nomatshini we-espresso kunye nomatshini we-cappuccino ulindele ukuba ugqibezele isidlo sakho sakusasa!
Ngaba uyafuna ukwabelana ngendalo yethu? Ke silandele ku-Instagram @une_nuit_au_coeur_du_vignoble
4.99 ·Izimvo eziyi-137
4.99 · Izimvo eziyi-137
Ukuba kufutshane kwentsimi yediliya yaseNuits Saint Georges (enokubonwa kwithafa) yi-asethi yethu. Iihambo ezintle ziyafumaneka kuwe. Umbindi wesixeko umgama nje wemizuzu emi-3 ngeenyawo: iiseli ezininzi, iibhari, iivenkile zokutyela kunye neevenkile zikhoyo kwaye ziyafikeleleka ngaphandle kwesithuthi sakho. Indawo yokuqubha yabucala kunye nekwabelwana ngayo kwindawo yokuhlala iya kukuzisela ubutsha ehlotyeni (imithetho yangaphakathi kufuneka ihlonitshwe). Ubumelwane obuzolileyo.
Ukukwamkela ngokobuqu yintando yethu kwaye kuyaluvuyo ukudibana nawe. Nangona kunjalo, ibhokisi yesitshixo ekhuselekileyo kwiholo yokungena iyafumaneka kuwe xa singekho.
Ingcebiso malunga notyelelo, ukufunyanwa kwesidiliya kunye neelali zethu ziya kunikwa kuni.
Ummandla onemihlaba eqhelekileyo kunye nemibalabala, uLionel, umfoti ochwepheshile, uya kukuthatha ukuba ufumanise isidiliya asithanda kakhulu, iindawo ezizodwa, eziphantse zibe ngasese, ngexesha losapho okanye isibini seefoto. Umzuzu osondeleyo ngexesha lokuhlala kwakho, iifoto ziya kuba sisikhumbuzo esixabisekileyo kuwe ... uLionel uya kukunika lonke ulwazi malunga nalo mbandela xa ufika okanye ngexesha lokuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Nuits-Saint-Georges